Maxaa kajira Warqada ESAT sheegay in Cabdi iley u Qoray Rag Qaraxyo Jigjiga kafuliya. | ogaden24
Maxaa kajira Warqada ESAT sheegay in Cabdi iley u Qoray Rag Qaraxyo Jigjiga kafuliya.
Dec 6, 2018 - Aragtiyood
Warka uu Goor dambe oo xalay baahiyay Telefeshinka Afka Xabashiga kuhadla ee ESAT uuna kusheegay in ciidanka sirdoonka Federal Police-ku Qabteen, Warqad uu madaxwaynihii Hore ee Kililku u Qoray Rag ay isku xidhan yihiin oo uu ugu Horeeyo Ahmed Mahad Colow.
Hadaba Warbaahinta Ogaden24 oo dareemaysa culayska iyo Khatarta dhan kasta ah ee warkaasi uu Leeyahay ayaa dadaal dheer u Gashay sidii ay xog dheeriya uga Heli lahayd waxa kajira warkaasi.
Dhamaan dadka aan laxidhiidhnay oo ay kujiraan Qaar-kamida Ehelada Ex. madaxwayne Cabdi iley ayaa ku baraarugay xidhiidhka aan lasamaynay, waxayna intooda badan kunoqotay Layaab iyo wax aan suuragal ahayn oo marna ba aan Rajo laga Qabin.
Hadaba Warkan maxaa lagu Tilmaami karaa.
In kaste oo ilaa iyo Hada aysan Jirin cid xaqiiqda dhabta ah iyo sida ay wax u jiraan sheegi karta hadana waxaa warkani uu u muuqda mid siyaasadaysan oo Ladiyaariyay, ayna kadambeeyaan kooxo isku xidhan oo leh Qorshe dhagareed u Jeedoyin badan xambaarsan.
Sida aynu Lasocono waxaa jira Qorshe ay xukuumada DDS dadaal ugu Jirto sidii loo Hoos keeni lahaa Hay’adaha dawliga ah ee Hoostaga dawlada Federalka oo ay ugu Horeeyaan Bankiga dhexe, shirkada Is-gaadhsiinta, shirkada diyaaradaha, iyo shirkada Xooga Korontada oo iyada shalay lagu dhawaaqay inay Toos u Hoostagayso xafiiska madaxwaynaha.
Dhamaan shirkadahaasi waxaa kashaqeeya oo mamulo dad u badan Axmaro waxaana soo raaca tira aan badnayn oo Oromo iyo Tigree ah, Hadaba Hadii dadaalka xukuumada DDS uu Midho dhalo oo ugu Yaraan shirkadahaas Lahoos Geeyo xukuumada DDS, waxaa Halkaas caqabadi kasoo Wajahaysaa Kooxaha iyo shaqaalihii say doonaan Yeelayaasha ahaa oo Qaar badan ay Lumin doonaan shaqoyinkoodii.
Telefeshinka warkiisu waxaa uu ahaa mid Falanqayn iyo iska saadaal u badan taasi oo Wiiqaysa xaqiiqada warka iyo Heerka cida laga Helay xogta, waxaana marka dhinacya badan laga Fiiriyo muuqanaysa in u Jeedada warku ay tahay mid Laqorsheeyay oo ladoonayo in ugu Yaraan Hakad Lagaliyo Hoos Gaynta shirkadahaasi dawliga ah xukuumada DDS, waxaana dooda xigta Noqonaysaa in masuuliyiinta iyo shaqaalaha shirkadu kudoodaan inaan Amaan ahaan Laysku Halayn karin Somaalida, aysana Lahayn Aqoon iyo Khibrad ugu Yaraan ay kula shaqayn karaan shirkadaha.
Marka aan dib ugu Noqono shakhsiyaadkii aan laxidhiidhnay waxaan Gabi ahaan ba suuragal ahayn sheegashada warqada, waayo Cabdi waa shakhsi Yaqaana Itobiya iyo Hay’adaheeda Amniga oo mudo dheer uu Lashaqaynayay, sidaasi darteed warkani iyo waxyaabo kale oo soo bixi doonaba waa Qayb kamida Qorshe siyaasadeed magaca Cabdi iley loo adeegsanayo oo lagu bad baadinayo dano dad Gaari leeyihiin.